ADWUIn Mormitoota Dadhabsiisuuf Kallattii Akeeke
Date: November 4, 2015Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, Finfinnee, 4 Sadaasa 2015) Koreen hojii raawwachiisaan ADWUI mormitoota irratti hordoffiin cimaa akka taasifamu ajaje.
Oduun Finfinnee irraa nu gahe akka ibsetti, Koreen hojii raawwachiisaan Adda Demookraatawa warraaqasa ummattoota Itiyoophiyaa(ADWUI) dhimmi nageenya biyyaa irratti yaaddoo guddaa qabu ibsee, rakkoolee karaa mormitootaa dhufuu malan dursee maseensuuf kallattii kaayeera.
Akka kanaan caasaan mootummmaa karaa hundaan sochii mormitootaa akka toátuu, haala mormii fi fincila biyya keessatti muláchaa jiru immoo dursee akka dhaamsu ajaja caasaalee hundatti dabarsee jira.
Keessayyuu, yeroo ammaa kana Oromiyaa, Ogaadeen, Gaambeellaa fi naannoo Amaaraa keessatti fincila belbeluuf jiru gadfageenyaan qoratee, dhimma yaaddessaa taúu irratti waliigaleera.
Akka kanaan weellistoota diddaa fi fincila kakaasan karaa hundaan rukutuu fi adoochuun akka eegalame ajajeera.
Murtee fi kallattiiwwan yaa’ii addichaa 10ffaan darban kunneen sochiilee mormittotaa karaa hunda galeessaan gaadiúu fi cabsuu irratti kan xiyyeefate taúun hubatameera.
Koreen hojii raawwachiisaan ADWUI qorannoo Sadaasa 2 fi 3 bara 2015 taassie kanaan qophii hojii itti aanuuf karoora ittisaa fi tarkaanfii biyyattii gara fuulduraatti tarkaanfachiisa ittin jedhe kaa’eera.
Waajjirri mana maree ADWUI akka himetti qophii karoora ammaa kanaan Oromiyaan adda durummaa, Ogaadeen, Amaaraa fi Gaambeellaan immoo walduraa duubaan deeggarsa human federaalaa guddaan nagaa fi tasgabbii akka eegsisanii fi hojji ittaanufis qophiiwwan haal duree akka taasisan itti himameera.
Previous Previous post: Dubartooti Oromoo “Ni Dandeenya!” jedhan!
Next Next post: Yaa’iin Gumii Abbootii Gadaa Oromiyaa Gaggeeffame